Fandriampahalemana monja… Mety ve sefo ? | NewsMada
Fandriampahalemana monja… Mety ve sefo ?
Saika hanoratra masiaka, hanakiana, hanao teny mahery, antso avo, sns, raha nahita ilay fanehoana nataon’ny mpitandro filaminana teny Mahamasina, omaly. Rehefa nandinika sy namakafaka anefa, nahatsapa ny tena fa tsy mety intsony izany…
“Alefaso hiady amin’ny dahalo any fa tsy aty an-drenivohitra no mamono vorona”, hoy ny filazan’ny ankamaroan’izay naneho hevitra tamin-katezerana. Saika niombon-kevitra tamin’izany, raha tsy afaka nandinika ka nahatsapa fa tsy vahaolana akory ny fanarabiana sy ny fanomezan-tsiny ireo mpitandro filaminana.
Fa mba miangavy re tompoko… Fiangaviana arahina fitalahoana mihitsy, raha izay no mety… Mba miangavy re, mba hampiharo amin’izay izato fahaiza-manaonareo, fa tena resy lahatra izahay. Hitanay ireny ny fitaovam-piadiana. Hitanay ireny ny fanehoana haiady, ny hakingana, ny fahaiza-mitifitra, sns, tena voafehinareo izany!
Ampahany vitsy amin’ny mpitandro filaminana manerana ny Nosy ihany no naneho hery tetsy Mahamasina, saingy azo antoka fa na ireo ihany aza no miasa, any anaty angano sisa no hanehoana izany dahalo sy malaso izany. Izany mpanendaka, mpangarom-paosy, mpamaky trano mpanafika, mpaka an-keriny, sns, izany aloha, dia tsy ho fantatry ny taranaka manaraka eo intsony…
Mba mangataka re tompoko… Raha misy hetra tokony aloa manokana ho an’ny fitandroana ny filaminana aza, tsy maninona. Fandriam-pahalemana monja, ahafahana miasa sy miary tsy misy fitaintainana, izany no angatahina. Hianatra tsy misy tebiteby. Hiompy sy hamboly tsy amin’ahiahy. Hivezivezy amin-kahalalahana ary mba handry fehizay fa tsy andriran’antsy…
Ny nofy hono, mety tanteraka. Raha mba tanteraky ny mpitandro filaminana mantsy izany nofin’ny Malagasy (sy ny vahiny ) izany, aoka fotsiny. Fantatray fa mendrika ianareo. Hiady ho anareo ny vahoaka, raha toa ka izay mpitondra mandalo tsy maharitra akory no sakana amin’ny fanatanterahana izany.
Mamerina ny fiangaviana re… Ny vahoaka sy ny fananany, manantena anareo. Raha milamina ny tany, mandroso ny firenena. Mba mety ve… sefo?